Bathenjiswa lukhulu abalandeli boZalo
ABALINGISI okukhona kubo uMike Mvelase, Bongani Madondo nomculi uBig Zulu bangabanye asebemenyezelwe njengabalingisi abazobonakala emdlalweni Uzalo njengoba bethulwe ngempelasonto. Isithombe: SIGCINIWE
ABASUNGULI bomdlalo ohamba phambili ngababukeli kuleli Uzalo, bathi abathandi bawo mdlalo mabalindele okukhulu okuzokwenzeka njengoba sekuseduzane kuphele isizini yesithupha.
Esitatimendeni esikhishiwe ngaboZalo bebebika ngezinguquko kulo mdlalo, bathe kunabalingisi abasha Isolezwe ebelilokhu libika ngabo lithi bazobonakala okubalwa umculi uSjava, Nina Mkhize noBig Zulu.
UMmamiste Thibedi ongomunye wophrojusa balo mdlalo, uveze ukuthi njengoba sekuyiminyaka eyisithupha waqala, okubajabulisa kakhulu wukuletha ubuso obusha obuthakaselwa ngabaningi.
“Iningi labalingisi eliqale ukubonakala kulo mdlalo wethu, selidumile manje. Usuyikhaya kwabaningi futhi abantu baseMzansi basikhombisile ukuthi bayazifela ngawo.
Esingakusho manje wukuthi kuningi okuzayo njengoba sethula ithalente elisha kulo mdlalo, esingangabazi ukuthi le sizini izophela ngegiya eliphezulu njengoba ababukeli bezolokhu beqhubeka nokufuna ukubona ukuthi yini ezokwenzeka.”
Uthe ukufika kwabalingisi kuzoshintsha umdlalo ngendlela ababukeli akade bengayilindele kodwa lokhu okungeke kuxoshe ababukeli.
“Kubalingisi abazobonakala kulo mdlalo kukhona umlingisi osekhona kulo mdlalo uBelinda Mncube (Nina Mkhize), ongumngani kaMaNgcobo onolaka, ongazwani nento ebhedayo futhi abasuka kude noMaNgcobo njengoba bazwana besebancane. Kusijabulisile ukuphinde samukele uMxolisi Majozi owaziwa ngoZuluboy, ozolingisa indawo kaSboniso, obuye aziwe ngoLast-Number, oyisigebengu esihlalise kabi umphakathi waKwaMashu. Kulo mdlalo uzobonakala ethembekile kumfowabo u-Amos, oyigeza onolimi kubantu njengoba bezifela ngaye. Indawo ka-Amos izolingiswa yinkakha uBongani Madondo,” kuchaza uMmamitse.
Kulo mdlalo uthe kuzohqmuka neqembu lezigebengu elintshontsha izimoto elaziwa ngokuthi Umbutho.
Leli qembu uthe linamalungu amahlanu okukhona kulona umphathi walo uMageba (Mike Mvelase), Nkunzi (Masoja Msiza), Sobhuza (Siyabonga Nene owaziwa ngoBig Zulu), Mandleni (Thokozane Sithole) noKotini (Herald Khumalo).
“Ababukeli abahlale bangasuki kulo mdlalo njengoba sibheke kwisizini yesine,” kuphetha uMmamiste.